Shiinaha yaanyo shiidan warshad 2200g iyo soosaarayaasha | Yaanyada
Jinka yaanyo waa mid ka mid ah cuntada maalinlaha ah. Waxay ka dhigi kartaa cuntooyinka kuwo macaan badan oo caafimaad leh dadka. Waxaan sameyn karnaa tayo kala duwan sida codsiyada macaamiisha iyo tayada tayada suuqa, koolladu waa yaanyo caadi ah midab casaan dabiici ah, 100% aan lahayn wax lagu daro, qaro weyn oo aan biyo lahayn. Waxaan sameyn karnaa GINO tayo yaanyo tayo leh.
"Tayada Koowaad" had iyo jeer waa mabda'ayaga si loo farsameeyo yaanyada.
Warshaddeenu waxay daboolaysaa aag 58,740 mitir murabac ah, waxsoosaarka sanadlaha ah ee hadda jira waa 65,000 tan, waxaan leenahay 9 yaanyo qasacadaysan iyo khadadka waxsoosaarka yaanyo ah, oo soo saari kara noocyo qeexitaan, sida 70g yaanyo qasacadaysan, 140g yaanyo qasacadaysan, 198g yaanyo qasacadaysan, 210g oo yaanyo qasacadaysan ah, 400g yaanyo qasacadaysan, 800g caano gasac qasacadaysan, 830g oo yaanyo qasacadaysan, 850g oo yaanyo qasacadaysan ah, 1000g yaanyo qasacadaysan, 2200g oo yaanyo qasacadaysan ah, 2.2kg + 70g yaanyo qasacadaysan, 3kg qasacadaysan yaanyo yaanyo ah, cabirka ugu weyn 4.5kg yaanyo qasacadaysan iwm.
Suuqyadeenna ugu waaweyn waa ku dhowaad dalalka Afrika, Bariga Dhexe, Mareykanka iyo waddamada Koonfurta Ameerika in ka badan 75 dal iyo gobollo.
Waxaan u adeegsanaa mashiin horumarsan, mashiinka wax lagu xiro ee faakiyuumka. Badeecadu way sii urursan doontaa oo qallalan doontaa, tiro badan oo badeecooyin ahna waa la qaadi doonaa, waxaan kuu badbaadin karnaa kharash badan oo adiga kugu baxa.
Dhammaanteenna daasadahayada leh dhoobada dhoobada cad ama jaalle ah ee gudaha ah si looga fogaado daxalka oo ay u ilaaliso tayada wanaagsan ee yaanyada.
1. Waxaan siin karnaa macaamiisha shaybaarro si xor ah, kaliya waxaan ubaahanahay macaamiisha si ay u istaagaan sicirka xamuulka, iyo waxa intaa dheer, waxaan leenahay akoonkeena DHL oo leh qiimo dhimis 50% ah, sidoo kale waad na siinkartaa xamuulka waqti kahor kadibna waxaan kuu soo diri doonaa muunado koontadayada, taas oo kuu badbaadin doonta kharash badan adiga!
2. Waqtigeena lacag bixinta waa 30% dhigaal iyo dheelitir in laga sameeyo nuqulka B / L, haddii L / C, waxaan u baahanahay inaan labalaabno hubinta oo aan xaqiijino inay aqbali karto
3. Wakhtiga la bixinayo: 30 maalmood ka dib qandaraaska la xaqiijiyay, dhigaalka la helay iyo calaamadda la xaqiijiyay.
4. SGS iyo BV labadoodaba waa la aqbali karaa, waad la xiriiri kartaa uun haddaad u baahato.
5. Xalaal, ISO, HACCP iyo FDA waa la heli karaa.
6. Waxaan leenahay naqshadeeye noo gaar ah xirfadle, ka dhigi kara naqshad quruxsan oo dhakhso leh.
Xiga: Yaanyo qasacadaysan 70g
Qasacadeynta Tamaandhada Jinka
Xajmiyo Kala Duwan Yaanyo
Isku Darka Labaad Isku Darka Tamaandhada
Flat Sachet Tamaandho dhaji
Tayada Yaanyo Tayada Tayo Leh
Jumlada Tamaandhada ku dhaji
Tamaandhada Ku dhaji
Yaanyo Ku Dheeh Alaab-qeybiye Shiinaha
Tamaandho Ku Dhaji Suugada
Jalaatada Yaanyada Jumlada